MANGARIVOTRA-MAHAJANGA : Ady amin’ny toe-tsaina no tokony hatao fa tsy ady amin’ny pesta
“Vola 500 Ariary isaka ny karinem-pokontany no takiana hoentina anakaramana ny tanora amin’ny fanadiovana ny tatatra feno loto na izany aza anefa tsy tokony maheno valan’aretina efa miseho vao mirongatra hanadio ny manodidina” hoy ny sefo fokontany. 27 octobre 2017
Hentitra ny sefo fokontany ao Mangarivotra Mahajanga ny amin’ny fampandraisana andraikitra ny isan-tokantrano ao anatin’ny fokontany iadidiany ny amin’ny fanadiovana ny tatatra lehibe izay mamakivaky ny tanàna ka ivarinan’ireo loton’ny rehetra.
Fepetra izay niarahana nanapaka io mba hoentina indrindra hanakaramana ireo tanora izay ao anatin’io fokontany io ihany. Sarotra ihany raha ho an’ity sefo fokontany ity ny haniraka ireo olona manan-kaja maro izay mipetraka ao anatin’ny fokontany iadidiany ka tsy misy afa-tsy ny fanaovana tsipaipaika toy izao, hoy izy no hany vahaolana ahafahana manadio ny tatatra maimbo feno loto. Nampiaka-peo an’i Martin Ranaivoson, sefo fokontany ao Mangarivotra anefa ny toe-tsain’ny olona sasany fa na dia efa nifanarahana izao aza fa 500Ariary ny vola efain’ny isan-tokatrano dia mbola misy minia tsy manefa ny adidiny ihany.
Manoloana izany dia misy koa ireo olona sasany, hoy izy izay mamoaka ny malotony mihitsy mandritra ny fanadiovana ataon’ireo tanora ka voatery ireto farany araka izany tsy maintsy mandraoka satria asa efa natao. Ady amin’ny toe-tsaina, hoy izy fa tsy ady amin’ny pesta no tokony hatao satria miankina amin’ny fahatsapan-tenan’ny tsirairay mihitsy izany fahadiovana izany fa tsy tokony miandry valanaretina vao hanadio ny manodidina.
Manao antso avo amin’ireo tompon’andraikitra amin’ny fanadiovana ny tanàna, indrindra amin’ny Ben’ny tanànan’i Mahajanga, Andriatomanga Mokthar Salim, ny sefo fokontany ny amin’ny tokony hanampiana ny ezaka efa nataon’izy ireo ny amin’ny fanadiovana ny tatatra manodidina ny tobin-tsolika Solima satria tsy vitan’ny angady sy kifafa izany fa mila fiara voatokana toy ny mihitsy vao mahafaka izany.
Ny zavatra hita eny anivon’ny fokontany eny mantsy dia tsy raharahain’ny kaominina ny mampanala ireo fako mivangongo eny amoron’arabe eny ao aorian’ny fanadiovana ataon’ny fokonolona. Nefa dia dradradradraina isan’andro ny ady atao amin’ny pesta.
Na izany anefa dia tsy manakana ny avy eo nivon’ny fokontany Mangarivotra izany satria dia mbola mitohy amin’ny sabotsy 28 oktobra izao ny fanadiovana faobe izay iarahana indray amin’ireo fikambanm-behivavy ao anivon’ity fokontany ity.